musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Dzvanya apa kana iri pepanhau rako! » Nortal inowana diki diki muTalgen
Nortal yakapinda muchibvumirano chakasimba chekutora vashoma dhiki mukutanga kwekuchengetedzwa kwekuchengetedzwa kweTalgen kusimbisa kugona kwekuchengetedzeka uye kuvhura mikana mitsva muEurope, North America, uye GCC.
Talgen ikambani yekuchengetedzeka inotarisana nemasisitimu ekuchengetedza cyber uye misika yekudzivirira. Iyo kambani inogadzira maturusi uye masevhisi emasangano anotungamira epasirese kuti azvigadzirire ivo pachavo kurwisa kutyisidzirwa kweinternet uye kuve nechokwadi chekuenderera kwebhizinesi.
Sekureva kweNortal's Muvambi uye CEO, Priit Alamäe, iyi inzira yekudyara yekambani yekuwedzera hutungamiriri hwayo munharaunda yekuchengetedza, izvo zvakakosha kwazvo kune vatengi veNortal varipo uye vatsva. "Hurumende nemasangano pasi rose vanofanirwa kunge vakagadzirira kugadzirisa kutyisidzira kuri kuwedzera, saka tinoona kudiwa pamwe nemukana mukufamba uku," akadaro Alamäe.
"Sechikamu chekushandira pamwe kwakabatana, tichave tichivaka timu yakabatana yenyanzvi dzekuchengetedza cyber uye kuunza hunyanzvi hwakawedzerwa kune vatengi vedu kuvabatsira kudzikisira kutyisidzira nekuvandudza kutsiga," akawedzera Alamäe.
"Sezvo kutyisidzira kwe cyber kuri kuisa njodzi huru kumasangano ese, cybersecurity iri pakati pezvinhu zvakakosha uye zvinonetsa vatungamiriri nemasangano," akadaro Martin Ruubel, CEO weTalgen.
"Masangano ekurasikirwa anotarisana nezviitiko zvecyber zvinoramba zvichikura - fungidziro dzichangoburwa dzinoisa huwandu paUS $ 6 tiririyoni pasi rose, gore rino chete - saka kukosha kwesangano kugona kudzoka kubva pakatyora kana kusashanda kunokosha," akawedzera Ruubel.
Sekureva kwaRuubel, izvi zvinoreva kuti basa raTalgen munzvimbo ino yakakosha kuve nehunyanzvi uye kuziva nzira yekuvandudza kusimba kwemasangano, zvichivagonesa kutsungirira kurwisa pamwe nekuderedza kurasikirwa kana kurwiswa kukaitika.
"Ndiri kufara kuve chikamu chemhuri yepasi rose yeNortal uye ndinopinda mushandirapamwe wehurongwa hwekushandisa zvakanakisa mumasangano ese uye nekubatanidza hunyanzvi hwedu kuvhura mikana mitsva," akawedzera Ruubel.